HORDHACA: West Ham v Man City- Robert Snodgrass & Jose Fonte oo Diyaar u ah Hammers Halka Fernandinho kaga soo laabtay Ganaax kooxda City +Xog & Xaqiiqada Kulanka | Laacibiin.net
Home » Falanqeyn » HORDHACA: West Ham v Man City- Robert Snodgrass & Jose Fonte oo Diyaar u ah Hammers Halka Fernandinho kaga soo laabtay Ganaax kooxda City +Xog & Xaqiiqada Kulanka
HORDHACA: West Ham v Man City- Robert Snodgrass & Jose Fonte oo Diyaar u ah Hammers Halka Fernandinho kaga soo laabtay Ganaax kooxda City +Xog & Xaqiiqada Kulanka	Ciyaartoyda cusub ee West Ham Robert Snodgrass iyo Jose Fonte ayaa ku jira xulka Slaven Bilic ee booqashada ay kusoo dhaweynayaan Manchester City kulan katirsan Horyaalka Ingiriiska caawa saacada geeska Africa marka ay tahay 10:45 PM.
Daafaca Portugal Fonte ayaa heli kara line Upka markii ugu horeysay isagoo loo arko bedelka Angelo Ogbonna, kaasoo dhawac ku maqnana doona inta ka dhiman xilli ciyaareedkan ka dib markii qaliin xaga jilibka ah lagu sameeyay.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee City Fernandinho ayaa ganaax kasoo laabanaya iyadoo Pep Guardiola uu soo dhaweeyay soo laabashada ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Brazil ka hor safarka ay ku tagayaan Stadium of London.
“Waa aan ciyaaryahan dagaal badan. Waxa uu adag yahay. Waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda ugu adag ee aan la shaqeeyay abid ayuu hadalkiisa ku daray tababaraha kooxda City.
Cheikhou Kouyate ayaa ka soo laabtay Africa Cup of Nations laakiin looma tixgelin doono xulashada kulanka City.
Havard Nordtveit ayaa ku seegaya dhaawac canqowga ah kulankaan isagoo ku biiray Diafra Sakho (dhabarka) iyo Arthur Masuaku (jilib) dhaawac ah ku maqan.
Man City ninka ugu goolasha badan Sergio Aguero ayaa sidoo kale ku soo bilowan kara kulankaan ka dib markii la nasasiiyay ciyaartii Crystal Palace ee isbuucaan.
Aguero iyo Fernandinho ayaa kusoo laaban doona shaxda City , halka lkay Gundogan, oo qaliin looga sameeyay jilibka muddo dheer uu maqnana doono.
Manchester City ayaa ku riyaaqay labo guul ka gaartay West Ham xili ciyaareedkaan , iyadoo wadar ahaan 8-1 kaga badisay Premier League,iyo FA Cup.
kooxda Hammers ‘ayaa 5-0 qasaaro kala kulantay FA Cup kooxda Manchester City kulan ka dhacay London Stadium bishii January 6-dii waxay ahayd guuldaradii ugu weyn ee kusoo gaaartay garoonkooda tartan rasmi ah tan iyo bishii May 1967.
Sergio Aguero ayaa isku dayay afar darbo oo bartilmaameed ah isagoo ka dhaliyay hal gool labadii kulan ee ugu dambeysay ee uu wajahay West Ham xilli ciyaareedkan.
Premier League, Aguero ayaa ka dhaliyay lix gool iyo isagoo ku caawiyey laba kale sagaal kulan oo uu wajahay West Ham.
Tan iyo bilowgii 2014-15, Manchester City ayaa badisay kaliya afar kulan 13 Premier League marti ay u ahaayeen kooxaha ka dhisan London.
Tan iyo December 31 2016, Claudio Bravo ayaa wajahay sagaal shuut oo bartilmaameed ah waxaana uu ka badbaadiyay keliya mid ka mid ah waxaa laga dhaliyay sideeda kale.
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/hordhaca-west-ham-v-man-city-robert-snodgrass-jose-fonte-oo-diyaar-u-ah-hammers-halka-fernandinho-oo-kasoo-laabtay-ganaax-xog-xaqiiqada-kulanka/">HORDHACA: West Ham v Man City- Robert Snodgrass & Jose Fonte oo Diyaar u ah Hammers Halka Fernandinho kaga soo laabtay Ganaax kooxda City +Xog & Xaqiiqada Kulanka</a>